မျက်နှာမူရာဘက် ဦးတည်၊ ခြေဦးလှည့်တဲ့နောက် လမ်းပေါက်အောင်လျှောက်တယ်...
ကမ္ဘာကိုတောင် ထုတ်ချင်းပေါက် လင်းချင်းတယ်။
မျက်နှာပြင်ကြည်တော့ မြင်မြင်သမျှ မဖောက်မပြန်
အရှိန် ရှိတယ် အရွေ့ရှိတယ်
သူ့မူ သူ့ဟန်အတိုင်း တစ်လှမ်းချင်း...
ညိမ်းနိုင် Sat Jun 18, 11:20:00 PM GMT+8
ဟုတ်တယ်.....သူမ ဟာ သဘာဝရဲ့စမ်းရေကြည်...၊ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ စမ်းရေကြည်....။
Anonymous Sat Jun 18, 11:23:00 PM GMT+8
ညီမ ရဲ့ စမ်းရေကြည်လေး ကို ဘယ်တော့ မှ သောက်သုံးခွင့် ရမလည်း ဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ
အားလုံး နဲ့ အတူ ထာဝရ သောက်သုံးနိုင်ရန် ဆုမွန်တောင်းပါတယ်
သဒ္ဓါလှိုင်း Sat Jun 18, 11:50:00 PM GMT+8
သဘာဝစမ်းရည်ကြည်လေးကို အားလုံးနဲ့အတူ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
seesein Sun Jun 19, 01:33:00 AM GMT+8
ရေကြည် ချမ်းမြတပေါက် မြန်မြန်သောက်ပါရစေ
ညီလင်းသစ် Sun Jun 19, 04:31:00 AM GMT+8
မြင်မြင်သမျှ မဖောက်မပြန် အရှိအမှန်တိုင်း ထင်ဟပ်တယ် ...တဲ့လား၊
'သူမ' ကို စမ်းရေလို့ ပုံနှိုင်းတာ သဘောကျလိုက်တာ၊ အေးချမ်းတယ်၊ အရွေ့ရှိတယ်၊ တောက်လျှောက် စီးတယ်၊ ဒီကဗျာကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် လက်မတွေ ၂ ချောင်းထက် ပိုလိုချင်မိတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ ရှိတာနဲ့ပဲ2thumbs up...!!!!!
phyu Sun Jun 19, 01:11:00 PM GMT+8
have read and enjoy your spring water, may the spring falls forever.
မေဓာဝီ Sun Jun 19, 03:15:00 PM GMT+8
အမချစ်ကြည်ကဗျာလေး လှလိုက်တာ ...
နွဲ့နွဲ့လေးပဲ ... အင်အားရှိတယ် ... ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မစီးဘူး ...
မှန်လိုက်တာ အမရယ် ...
စမ်းရေလိုပဲ အမြဲအေးချမ်းပါစေ ....
ပန်းချီ Sun Jun 19, 04:51:00 PM GMT+8
ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး the brook ကိုသွားသတိရတယ်..မမရေ..သိပ်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း..း))
တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး..။ ဟုတ်တယ် သူမဟာ အမြဲအင်အားရှိတဲ့ နွဲ့နွဲ့ကလေးပါပဲ...။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှာ နောက်မရွံ့ဘူး..
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) Sun Jun 19, 10:06:00 PM GMT+8
စမ်းရေက အင်အားကို ပေးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်။ သာယာမှုကို ပေးတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Jun 19, 11:13:00 PM GMT+8
စမ်းရေနဲ့တူတဲ့ သူမ ငြိမ်ငြိမ့်ညင်သာ သို့သော် အင်အားရှိစွာ အမြဲထာဝရစီးဆင်းနိုင်ပါစေ.........
မအိမ်သူ Mon Jun 20, 10:24:00 PM GMT+8
မချစ်ရေ စမ်းရေကြည်ကြည်လင်လင်လေး နွဲ့နွဲ့လေး စီးဆင်းနေမြဲ .. အနှောက်အယှက် အဆီးအတားများကို ဖွဖွငြင်သာကျော်ဖြတ်ရင်း နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန်စီးဆင်းနေနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ရှင်..
မြစ်ကျိုးအင်း Tue Jun 21, 01:37:00 AM GMT+8
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ စမ်းရေကြည်ပါပဲ။ အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်း ကြည်လင်သာယာစွာ ရည်ရွယ်ရာကို ဆက်လက်စီးဆင်းနိင်ပါစေ။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Tue Jun 21, 03:13:00 AM GMT+8
ရုတ်တရက် ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး လူအမည် အောင့်မေ့လို့ ... :P
Anonymous Tue Jun 21, 08:06:00 PM GMT+8
"Men may come and men may go but i go on forever."She may go on for ever.Thanks......Gyidaw
ပြည်ကောင်းအောင် Wed Jun 22, 05:46:00 AM GMT+8
မမချစ်..၊ ဒီလောက်လှတဲ့၊ ကွက်တိဖြစ်တဲ့ အတွေးလေး ဘယ်လိုရလိုက်တာတုန်းဗျာ..။ စမ်းရေ..တဲ့လေ။
တမာဖူးခဉျြ - တမာခဉျြလို့ အသံကွားလိုကျတာနဲ့ မာမာတို့ ငယျဘဝလေးကို အရမျးလှမျးမိပါတယျ စညျးကမျးကွီးတဲ့ အမအေ့မ အကွီးဆုံး အပြိုကွီး ကွီးကွီးရဲ့လကျပျေါမှာ ကွီးခဲ့...
Linus(လငျးနပျဈ)..... - အဲဒီနတေု့နျးက လငျး ကြှနျမကို စာအုပျပွပှဲသှားဖို့ သူကိုယျတိုငျကားမောငျးပွီး လာချေါခဲ့တယျ....။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ စိနျရတုနျဝငျးထဲမှာ လုပျတဲ့ စာအုပျပွပှဲလ...